REDPlayer – Games, movies and lifestyle
လက်ရှိ game တွေဆော့ရတာပျော်တယ်မဟုတ်လား၊ အရင်ကတော့ PC မှာ.. ပြီးတော့ PS နဲ့ Xbox ပေါ့။. အခုနှစ်တွေမှာရော? Mobile gaming ဆိုတဲ့…
[unicode] Bethesda ကတော့ E3 မှာသူတို့ရဲ့ Fallout 76 အကြောင်း နည်းနည်း အသေးစိတ်ထပ်ပြောပါတယ်။ အံ့သြရမှာက E3 မတိုင်ခင် ပရိတ်သတ်တွေ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့…
[zawgyi] ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 ကတော့ ဂိမ်းလောကမှာ Battle Royale နှစ်လို့ပြောရလောက်အောင်Battle Royale game တွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်း ပေးနိုင်တဲ့ “ရသ” မတူခဲ့ပါဘူး။…
[zawgyi] GCN ဆိုပြီးသိတာတော့ကြာနေပါပြီ။ သိနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မရောက်ဖြစ် အေးဆေးလည်းသွားမတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ အချိန်ရတာနဲ့ သူတို့ studio ကိုရောက်ခဲ့ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ GCN Game cast Network…
[zawgyi] သင်ဟာ Gamers တစ်ယောက်လား သင့်ကိုသင်ရော Gamers တစ်ယောက်လို့ ခံယူထားလား.. ဘယ်လို Game တွေဆော့ဖြစ်လဲ။ FPS တစ်မျိုးတည်းလား၊ strategy သီးသန့်လား၊…
[zawgyi] ကျွန်တော်တို့ Dota2hero lore တွေကို အပျော်အဖြစ် ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ Comment Section မှာ DotA နဲ့…
[zawgyi] “MOBA Game တွေကို ကြိုက်လွန်းလို့ အစုံကူးပြီးလိုက်ဆော့ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးက Hero တွေ Map တွေ Item တွေက ဆင်တူနေတော့…
MLBB ဆိုတာကတော့ Mobile legends: bang bang ကိုပွောတာပါ၊ အရငျကတော့ mobile legends ပဲ၊ တရားစှဲခံရလို့ နာမညျပွောငျးသှားတာ။ 2016 July…
CS:GO လို့ အတိုကောကျချေါနကွေတဲ့ Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO) က MFPS (Multiplayer first-person shooter) တဈခုပါ။ အမြားစုကတော့…
NOTES & MOVIES